Calamadaha Naaziga oo la surey goobo kala duwan ee dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Calamadaha Naaziga oo la surey goobo kala duwan ee dalka
La daabacay torsdag 20 april kl 16.04
Kaamerada ilaalisa xabsi ku yaala magaalada Oslo. sawir: Kallestad, Gorm
Habeen-nimadii xalay ayaa laga taagay xarruntii hore ee war-geeyska Sydsvenska magaalada Malmö ee barxadda xarunta Löddeköping laga taagay calan matalaya sumadda xukumaddii Naaziga.
Sidoo kale magaalada Eskilstuna ayey laba ruux isku dayeen iney fal midkaasi la mid ah ku tallaabsadaan oo ey calan midkaasi la mid h ka taagaa, hase yeeshee uu ciidanka ammaanku markii arkay oo uu ka hor istaagay.
- Mid ka mid ah howl-wadeennada ayaa markiiba indhaha kaamerada ka arkay falka ay labad nin ku howlanaayeen, sida uu sheegay Lennart Ahlin, madaxii howsha ee ciidanka ammaanka gobolka Sörmland.
Ciidanka ammaanka ayaa suurtagl u leh inay kaamerada ka daawadaan dhacdooyinka barxadda Fristadstorget ee magaalada Eskilstuna. Kolkii ey goobta tageen ayey ciidanka ammaanku gacanta ku dhigeen nin 22 jir ah oo isteeshinka loo soo kaxeeyey sidii wareeysi loola yeelan lahaa, halka uu midkii kalena goobta ka baxsaday. 22-jirka ayaa lagu soo oogey dacwadda isku dirka qowmiyadaha, waxa afka iswiidhishka lagu yiraahdo - hets mot folkgrupp.
Dhacdooyinka noocaasi ah ee calanka calammadda Naaziga lagu surayay ayaa ka dhacey goobo kala duwan ee dalka ka mid ah sida magaalada Malmö, barxadda daartii hore ee war-geeyska Sydsvenskan ee waddada Krusegatan, sida uu war-geeysku qoray.
Dhacdo middaa la mid ah waxay ka dhacday goob in xoogaa ah u jirta agagaarka bartamaha koonfurta Löddeköpinge oo dhacda waqooyiga magaalada Malmö.
Ciidanka ammaanka ayaa hoos u dejiyey labada calan, iyadoona dacwadda lagu soo oogey lagu macneeyey falka isku-dirka qowmiyadaha kala duwan, sida uu sheegay Calle Persson, ahna af-hayeenka saxaadda ee xarunta hoggaanka ciidanka ammaanka ee gobolka koonfureed.
Maxaa ugu wacan dhacdooyinka maanta?
- Waxay maanta ku beegan tahay maalintii dhalashada Hitler, sida uu sheegay Calle Persson oo u warramayay hayadda wararka Sweden ee TT.
Magalada Stockholm qudheeda ayaa laa taagay tabeelle saqafka tunnelka Fredhäll oo ey ku qorraayeen ereyo xambaar-sanaa isku dirka qowmiyadaha kala duwan, sida uu boggiisa internet-ka ku qoray ciidanka ammaanku. Saraakiil ka socota ciidanka ammaanka ayaa goobtaasi tagtey oo boorkaa ka dejisay goobta saqafka ee la surey, isla-markaana dacwad laga oogey fal-dembiyeedkaa.